Jeb Bush na - achọpụta na Apple Watch nwere ike ịza oku Esi m mac
Jesus Arjona Montalvo | | Apple Watch, Noticias, ọtụtụ
Dị ka ị pụrụ ịhụ na vidiyo nke Jeb ohia Na anyị na-egosi gị mgbe ị gụsịrị, ọ nwere obere nsogbu na elekere Apple ebe ọ nwere ya na nkwojiaka ya, n'ezie n'agbanyeghị na o nwere ike dị ukwuu ma nwee ọtụtụ kọntaktị, ike ya abụghị teknụzụ. Jeb Bush nwanne nke gara aga Onye isi ala nke United States George Bush, onye ndoro ndoro ochichi onye isi ochichi nke United States, ekwuola n'oge gara aga na ya ejighị Apple Watch, ma ọ bụ ihe ọ bụla sitere na Apple. Ọchịchọ maka otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na US. Nke a bụ vidiyo ebe nwee nsogbu na nnọkọ ogbako na Apple Watch, ha wee malite ịchị ọchị banyere ọnọdụ a chọtara.
Ma ugbu a, ọ hụrụ ya n'anya, dị ka ha na-ekwu na mba North America ọ bụ 'Cool', mana ọ na-eme nkatọ ya na echiche ya, nke ọ na-ekpughe na interface onye ọrụ na ndụ batrị nwere ike ka mma. O doro anya na ọ debere Apple Watch ya ruo ọgwụgwụ.
N'oge Ajụjụ ọnụ ahụ, dị ka anyị na-ahụ na vidiyo ahụ, ndị Onye ndenye ndụmọdụ Bush mere ya oku ekwentị, nke ọ gara n'ihu ịza na elekere Apple. Anyị nwere ike ịnụ onye ahụ na njedebe nke ọzọ na mbido mkparịta ụka ahụ, Bush na-echetụ ntakịrị ka ọ na-agba mbọ ịchọpụta ebe olu ahụ si abịa hahaha. Otu n'ime ndị na-agba ajụjụ ọnụ jụrụ ya ma ọ na-esite na Apple Watch ya, Bush na-aza nke ahụ na elekere gi igaghi ekwu okwu.
Ngwa ngwa ọ na-ngwa ngwa chọpụtara na ọ bụ n'ezie site Apple Watch. N'ihi ya, elekere ahụ dị nso na ntị gị maka obere oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Jeb Bush chọpụtara na Apple Watch nwere ike ịza oku
Apple na-eme ka eriri ihe ntụgharị nke ghọrọ ihe nkwụnye